Dalxiisayaasha Shiinaha miyay soo noqonayaan? Warbixin Qodobo Muhiim ah oo lasoo saaray
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » | » Dalxiisayaasha Shiinaha miyay soo noqonayaan? Warbixin Qodobo Muhiim ah oo lasoo saaray
| • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Shiinaha • Wararka Hong Kong • News • Dadka • Wararka Jebinta ee Taiwan • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Akadeemiyada Dalxiiska Shiinaha ayaa soo saartay "Warbixinta Sannadlaha ah ee Horumarinta Dalxiiska Dibadda ee Shiinaha 2021."
Warbixinta waxaa magac ahaan sii daayay Dr. Jingsong Yang, Agaasimaha Machadka Daraasaadka Caalamiga ah (Machadka Cilmi-baarista Hong Kong, Macao iyo Taiwan.)
Sannadka 2020, safarrada dalxiiska ee Shiinaha ee dibadda ayaa wadartoodu dhan tahay 20.334 milyan, hoos u dhac 86.9% ah marka la barbar dhigo 2019. Bishii Febraayo 2020, tirada safarka dibadda ayaa aad hoos ugu dhacday wax ka yar 600,000 in ka badan 10 milyan bishii Janaayo. Socdaalladii kooxda dibadda ayaa si buuxda u joogsaday. Safarrada dalxiiska ee dibedda ee 2021 ayaa la saadaalinayaa inay gaaraan 25.62 milyan, koror 27% ah 2020. Marka la barbar dhigo baaxadda ballaaran ee in ka badan 100 milyan oo socdaalayaal dibadda ah ka hor masiibada, dalxiiska dibedda ee Shiinaha ayaa asal ahaan weli taagan.
Aasiya waxay sii ahaan jirtay meesha ugu sarreysa iyadoo 95.45% ay booqdeen dadka Shiineeska ah ee safarka ah, waxaa ku xiga Yurub, Ameerika, Oceania, iyo Afrika. Guud ahaan, safarada qaaradahaas ayaa hoos u dhacay 70% ilaa 95%, iyadoo Aasiya ay qaadatay hoos u dhaca ugu yar iyo Oceania oo ah hoos u dhaca ugu weyn. Hong Kong SAR, Macao SAR, iyo Chinese Taipei ayaa weli ah meelaha ugu badan ee la booqdo, iyaga oo ka dhigan in ka badan 80% booqashooyinka.
15ka goobood ee ugu sareeya waxay ahaayeen Macau SAR, Hong Kong SAR, Vietnam, South Korea, Japan, Thailand, Cambodia, the US, Singapore, Chinese Taipei, Malaysia, the UK, Australia, Canada iyo Indonesia, iyadoo hoos u dhac u dhaxeeya 66% ilaa 98%. Socdaalka Macau SAR wuxuu muujiyay soo kabasho cad.
Sahanku wuxuu muujinayaa in badbaadada, fogaanta gaaban, iyo wehelnimadu ay yihiin meelaha ugu muhiimsan ee socdaalka dibadda ah. 82.8% jawaab bixiyaasha ayaa u safri doona meel aysan hadda ka jirin infekshannada COVID. Jawaab bixiyaasha ayaa aad ugu janjeera inay ka fogaadaan meelaha dadku ku badan yahay. 81.6% waxay muujinayaan in in muddo ah, ay dooran lahaayeen safarka gudaha halkii ay ka ahaan lahaayeen socdaal dibadda ah. 71.7% waa ka cagajiid inay dibadda ugu safraan hawada sababo la xiriira hubin la'aanta caabuqa COVID.
Safarrada dibadda ah, inta badan jawaab-bixiyeyaashu waxay ku tiirsan yihiin warbaahinta bulshada iyo boggaga internetka ee safarka, kaliya 25.08% ayaa isticmaali doona hawlwadeennada dalxiiska, taas oo muujinaysa hoos u dhaca 37.79% marka la barbardhigo 2019. Jawaab bixiyaasha intooda badani waxay doortaan " safarka qoyska oo dhan "iyo" safarka qoyska qayb ka mid ah,” iyo in ka yar ayaa doorta "safar keligiis" iyo "la safar dad qalaad." Marka la eego muddada safarka, in ka yar 10% waxay doortaan in ka badan 15 maalmood iyo in ka badan 60% qorshe 1 ilaa 7 maalmood, kuwaas oo ku dhawaad ​​50% ay doortaan 4 ilaa 7 maalmood.
Dalxiiska dibedda ka baxa ayaa weli saameynaya masiibada caalamiga ah, iyo labadaba xaaladaha gudaha ee caalamiga ah iyo Shiinaha labaduba waa kuwo aan degganeyn. Mustaqbalka, tillaabooyinka xakameynta caafimaadka dadweynaha waxay u badan tahay inay noqdaan kuwo caadi ah, dalxiisayaasha Shiinaha ee dibedda ka baxaya waxay jeclaan doonaan badbaado iyo ilaalin caafimaad oo wanaagsan. Warshadaha dalxiiska ee dibadda ka baxa ayaa la qabsanaya wax caadi ah oo cusub iyada oo loo marayo hal-abuurnimo tignoolajiyadeed iyo horumarin, oo ay ku jiraan tallaallada, tijaabinta PCR ee degdegga ah, koodhadhka caafimaadka dhijitaalka ah, iwm kaas oo si togan u caawin doona dalxiiska ka baxsan mustaqbalka.
Warbixintu waxay sheegeysaa in muwaadiniinta Shiinuhu ay weli qabaan rabitaan ah safarro dibadda ah, oo ay taageerayaan saldhigga dadweynaha ee tirada badan, magaalooyinka, iyo xaaladaha dhaqaale ee wanaagsan. Warbixintu waxa kale oo ay ka kooban tahay qayb qeexaysa dadaalka/hal-abuurka warshadaha ee ka gudbida dalxiiska dibadda iyo dalxiiska gudaha si loo daboolo baahida suuqa.
Qeybta ugu dambeysa ee Warbixinta waxaa ku jira falanqayn muhiim ah oo ku saabsan aragtida 2022.